သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကျွန်မချစ်တဲ့ သစ်တစ်ပင်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:12 AM
မလေးရေ.. ဒီပို့စ်လေးထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ ထပ်တူပါပဲ ။ ကျွန်မတို့တတွေ ဘ၀ခရီးရှည်ကြီးကို ဖြတ်နေရတုန်း ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ ရလဒ်ကို ခံယူရဲတဲ့စိတ် မွေးပြီး ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ကြရမှာပေါ့ ။
ရေးထားတာလေး အရမ်းကောင်းတယ် ။ မလေးရဲ့ master piece နောက်တခုပေါ့း)ဘလောဂါ့စာအုပ်မှာ ထည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ ။
မဂျစ်တူးပြောတာကို သဘောတူတယ်၊ ဒီဝတ္ထုက မအိမ့်ချမ်းမြေ့ရဲ့ နောက်ထပ် masterpiece တခုပဲ၊ ဘလော့ဂါစာအုပ်အတွက် ပို့ဖြစ်အောင် ပို့စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာပရိသတ်နဲ့ ထိတွေ့ဖို့ အနီးစပ်ဆုံး အခွင့်အရေးပဲ မဟုတ်လား။
စကားမစပ်… ဘားတန်းဥပမာကို သဘောကျတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ် ဖြစ်ပေါင်းများပြီ၊ ပြုတ်ကျလွန်းလို့ သိပ်လည်း မနာတတ်တော့ဘူး…
မလေးရေ.. မလေးရဲ့ ဘလောက်ကို အနော်ပဲ ဖတ်ပြီးဘလောက်စာအုပ် ပေါ်တင်တင်ပေးဖို့တာဝန်ကျတာ မလေးရ။ ခုတော့မလေးဆီက ဟိုဟာလည်း ယူမယ်. ဒီဟာလည်းယူမယ်ဆိုပြီး ရွေးထားတာများကြီးပဲ..။ ခုဒါကိုလည်းယူအုံးမှာပဲ.. နော်မလေးနော်။
တပုဒ်လုံးလည်း ကောင်းပါတယ် ညီမလေး။
မဂျစ်၊ ကိုပုထုဇဉ်၊ ဘာညာ၊ ကိုတက်စ်၊ မပန်၊ မမေ၊
ဒီလိုနွေးထွေးတဲ့ အားပေးမှုလေးတွေကို သယ်ဆောင်ပြီး ကျမ ခရီးဆက်နေတာပါ…
တခု ထပ်စဉ်းစားမိတယ် မလေးရေ... ကျမသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဂျူးရဲ့ ကျွန်မ၏သစ်ပင် ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေး အကြောင်း.. ။
ဆရာမဂျုးက ကျမချစ်တဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ..
တပြည်သူရေ.. ၀တ္ထုလာဖတ်သွားတယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ တချို့နေရာတွေမှာ စကားပြောနဲ့ စကားပြေကို ရောရေးထားတာတော့ တွေ့တယ်နော်။ စမ်းသပ်ထွင်ရေးကြည့်တာများလား မသိ။
ကျမ ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူး..ပထမက စကားပြောနဲ့ရေးပြီး စကားပြေနဲ့ ပြင်တော့ ကျန်ခဲ့တယ်ထင်တယ်..စာလုံးပေါင်းတွေကလဲ မှားသေးတယ်အကိုရေ..သတ်ပုံမှားတဲ့ညပေါ့..
i want to be that kind of tree which can not only hang out with human but also giveaplace for someone to stay away from tired and robotic life.
************two thumbs up************
သူများတွေရေးပြီးတော့မှ နောက်ဆုံးမှာ ၀င်ရေးတယ်လို့တော့ မမြင်ပါနဲ့နော် မလေးရေ…
သူများတွေရဲ့ အားပေးစကားကို အရင်ကြားစေချင်တာကြောင့်ရယ်၊ ဒီစာစုလေးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်ဖတ်ရင်း စဉ်းစားမိနေတာတွေရယ်ကြောင့်ပါ…
ဒီစာစုလေးကို မလေးတင်တင်ချင်း ဖတ်မိပါတယ်. အင်မတန်မှ ပြေပြစ်တဲ့ စကားပြေအရေးအသားလေးပါ. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သစ်ပင်ကြီးကိုယ်တိုင် အသက်ဝင်ပြီး စကားတွေ အပြန်အလှန်ပြောနေတဲ့ ပုံစံလေးရေးသွားတာ ဩဇဂုဏ်မြောက်စေပါတယ်ဗျာ.
ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်တဲ့စာသားလေးတစ်ချို့ ထုတ်ပြမယ်နော်.. တစ်ခြားစာသားတွေလည်း ကောင်းပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဒီစာသားလေးတွေကို ဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာကို ခံစားသွားရလို့ပါ.
သစ်ပင်ကြီး၏ ရယ်မောသံကို ကိုယ်အံ့သြသွားမိသည်။ မာနသံနှောသည့် တပ်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ရယ်မောသံ။
အဲလိုရယ်သံမျိုး ကျွန်တော်လည်း ရယ်တတ်ချင်လိုက်တာ..
ပင်စည်ထဲမှာ ဖက်တွယ်မြှပ်ဝင်လို့ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးလိုက်မိသည်… တဲ့..
လက်တွေ့ဘ၀မှာ မလေးကို ကြင်နာနားလည်တတ်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ခဏလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုနားခွင့် ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် မလေး….
ဒီနေ့မှ ဖတ်မိလို့ ရေးလိုက်တာ .စိတ်မရှိနဲ့ နော် ..
တိုက်ဆိုင်တာ တစ်ခုတွေ့လို့ ..
အိ ဒီကိုလာခါစ က မေမေပေးလိုက်တဲ့ ဆည်းလည်းလေးကလည်း
မအိမ့်ချစ်တဲ့ သစ်ပင်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆည်းလည်းလေးနဲ့ တော်တော်တူတယ်သိလား ..
အိတို့ဆီမှာ က မြေရှားတော့ အိပ်ခန်း ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာ ချိတ်ထားရတာပါ .. ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လုံး အဲဒီ့ဆည်းလည်းသံက အိမ်ကိုလွမ်းတိုင်း အားပေးတဲ့ အသံပေါ့ ..
နောက် ပြီး ...
အဲဒါ အိကိုယ်အိပြောနေကျ စကားသိလား ..
ဒီစာလေး ဖတ်ပြီး .. ခံစားချက်ခြင်းတော်တော်များများတိုက်ဆိုင်တာ သိရပါတယ် . .ဒီလိုပဲ အိမ်နဲ့ ဝေးတဲ့သူတိုင်း အဲလိုပဲလား မသိပါဘူးနော် ..
ဒီဝတ္ထု ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ရေးတတ်တဲ့ မအိမ့်ကို ကျေးဇူး ပဲနော်. .^.^
“မလုပ်နဲ့လေ..သူတို့ကိုသဘာဝအတိုင်းထားလိုက်၊ မင်းတို့လို အစာကြွေးသူတွေများလာရင် သူတို့ဘာသာ အစာမရှာတတ်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ အရာရာကို ပါးစပ်ထဲအထိ လိုက်ခွန့်ပေးခြင်းဟာ စေတနာမဟုတ်ဘဲ ဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။ သူ့သဘာဝအတိုင်းလေးရှိပါစေ”
တော်တော် ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အတွေး
“မင်းကိုယ်မင်း စိတ်စွမ်းအင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပိုးကောင်လေးကို ခေါ်လို့သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။ သူခရီးသွားနေတာနှောက်ယှက်သလို မဖြစ်သွားဘူးလား။ အခုမင်းက သူ့ရှေ့က အတားအဆီးဖြစ်နေပြီ၊ သူဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးလေ”
ပိုးကောင်လေး က ပေကပ်ပြီးနေ ခွင့်ရသလောက်နေ နေမယ်လို့ ရော မတွေးဘူးလား
ကျနော် သစ်ပင် ခဏလောက်ဖြစ် ခွင့်ရချင်လာမိတယ်
ဒါပေမဲ့တောအုပ်ထဲ ကသစ်ပင်တော့ မဟုတ်ဘူး ..
ပုဂ္ဂလိ ကပိုင် ခြံလေးတစ်ခြံထဲ က သစ်ပင်